Wamkelekile kwi nkampani!
Fuel Level woluvo
Bafuna Imeko yangoku
Inetweki unxibelelwano, zininzi kwisiseko sesikhululo isasazwe phezu komhlaba wonke, yaye uninzi lwabo ibekwe ezintabeni eziphakamileyo, kunzima ulondolozo, Ukugcinwa yemveli ekuthiwa nayo kuthatha eqela labasebenzi iqashiso, izibonelelo zemali, kwaye ngokuthembekileyo amahlwempu ukufika. Ukuqinisekisa ukusebenza rhoqo of network e China, iimfuno aphezulu izixhobo amandla kunye nenkqubo generator kuvuswa.
Ezi mfuno ziquka: Isilawuli esweni izixhobo amnike, izixhobo zonxibelelwano; ekunciphiseni iindleko zokusigcina, kwanokuqinisekisa iimeko isandi yokusebenza kwenkqubo ukwandisa ngobuchule ukusebenza comprehensive.
inkqubo yokubeka esweni Base Transceiver isayithi inkqubo ebanzi edibanisa kunye data (ezifana ucango umazibuthe status sensor (ulawulo yokungena) ubushushu, ukufuma, amandla, air conditioner, umfanekiso, njalo njalo), efunyenwe woluvo kwaye ithunyelwe nge terminal unxibelelwano kwelo ziko; ukwenzela ukuba kubekwe esweni bume okukufutshane, ubume amandla siphaphile ngexesha lenene.
Site bume kude esweni
Site esweni ukusetyenziswa kwamandla |
Distribution amandla Site esweni
ulawulo yabasebenzi site
impendulo ngexesha likaxakeka Site kunye nolawulo sithumela
operation sayithi & iindleko zolawulo
Cwangcisa ulondolozo lwezixhobo kwi shedyuli
Supply amafutha ngexesha
Ukunciphisa amafutha kunye nezinye ukusetyenziswa kwamandla
Khusela izinto ezibalulekileyo kwindawo
Ubushushu & Ukufuma woluvo
Fumana iindaba zakutshanje efike nsuku!